အကြင်နာမပို စေတနာမချိုတဲ့ ဖိုးသီးချို | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Complaint / Claim » အကြင်နာမပို စေတနာမချိုတဲ့ ဖိုးသီးချို
အကြင်နာမပို စေတနာမချိုတဲ့ ဖိုးသီးချို
Posted by ဝေးလွင့်တိမ် on Sep 24, 2011 in Complaint / Claim, Opinions & Discussion | 39 comments
ဖိုးသီးချိုဆိုတာလူတစ်ယောက်နာမည်မဟုတ်ပါဘူး ။ ကျွန်တော်တို့သံတွဲမြို့ကို ၂၄ နာရီ မီးပေးနေတဲ့ ကုမ္ပဏီတစ်ခုနာမည်ပါ ။
ဖိုးသီးချိုကမီးပေးလာတာ ခုဆိုရင် ၄ လကျော်ခဲ့ပါပြီ ။ ဒါပေမယ့် ခုလက်ရှိအချိန်မှာတော့ ဖိုးသီးချိုရဲ့မီးအလင်းရောင်က သံတွဲမြို့ပေါ်နေရာတော်တော်များများမှာ မရောက်ရှိနိုင်တာကိုတော့ ၀မ်းနည်းဖွယ်မြင်တွေ့နေရပါတယ် ။ ချစ်ကောင်းလဘက်ရည်ဆိုင်ရှေ့ ဈေးကြီးဘေးက လမ်းမှာလည်း မှောင်မိုက်နေပါတယ် ။ ပြီးတော့ မြို့နယ်ခန်းမနောက်ဘက် ၊ ဈေးပတ်လမ်း ၊ တောင်ပိုင်းရပ် ၊ လ.၀.က ရုံးရှေ့ ရတနာလမ်းတစ်လျှောက် နဲ့ နေရာအတော်များများမှာလဲ ညဘက်တွေမှာ လမ်းမီးတိုင်တွေ မီးမလင်းတာကိုတွေ့နေရပါတယ် ။
နောက်တစ်ခုကတော့ မီတာခကိစ္စတွေပါ ။ မီတာထိမ်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခ ၁၀၀၀ ထပ်ပြီးတိုးမြှင့်ကောက်ခံနေပါတယ် ။ အဲဒီကိစ္စကို မြို့မှာရှိတဲ့ ရပ်မိ ၊ ရပ်ဘ ဆိုတဲ့သူတွေကတော့ သဘောတူတယ်ပြောပါတယ် ။ ဒီနေရာမှာပြောစရာရှိလာတယ် ။ မြို့တစ်မြို့ရဲ့ မျက်နှာဖုံး ရပ်မိရပ်ဖဆိုတဲ့လူတွေက လူချမ်းသာတွေများပါတယ် ။ ဆင်းရဲချို့တဲ့သူတွေ ၊ လက်လုပ်လက်စားတွေ ၊ ပင်စင်စားတွေ ( ပင်စင်စားဆိုတဲ့နေရာမှာ ဌာနကြီးများမှ အရာရှိပင်စင်စား လူချမ်းသာများမပါဝင်ပါ ) ကတော့ သဘောမတူနိုင်ပါဘူး ။ မြို့မိမြို့ဘတွေကပြောတယ်တဲ့ ` ငွေတစ်ထောင်တိုးကောက်တယ်ဆိုတာ ဘာမှပြဿနာမရှိပါဘူး လက်ဘက်ရည်တစ်ခါသောက်ရင်တောင်မှ ငွေငါးထောင်လောက်တော့ အနည်းဆုံးကုန်တာပဲ ´ လို့ပြောတယ်တဲ့ ။
စဉ်းစားကြည့်ပါ ငွေငါးထောင်ဆိုတာ လက်လုပ်လက်စားမိသားစုတစ်ခုမှာ တစ်နေ့ရှာလို့မရနိုင်ပါဘူး ။ အဲဒီလိုလူတွေနဲ့ သူတို့နဲ့တော့နှိုင်းယှဉ်ပြီး ငွေတစ်ထောင်ကိုအရေးမထားလုပ်လို့ရပါ့မလား ။ငွေတွေအရှုံးပေါ်နေလို့ မီတာထိမ်းသိမ်းခတိုးကောက်တယ်ပြောတာပဲ ။ သံတွဲမြို့မှာ မီတာအလုံးရေ ၄၀၀၀ ကျော်ရှိပါတယ် ။ အဲဒီတော့ တစ်လကို သိန်းလေးဆယ် ပိုရသွားပါတယ် ။ ဖိုးသီးချိုက တစ်လကိုဘယ်လောက်ရှုံးနေတယ်ဆိုတာ ပြည်သူတွေမသိပါဘူး ။ ပြည်သူတွေသိအောင် ရှင်းလင်းပြတာမျိုးလဲမရှိပါဘူး ။ မြို့မိမြို့ဘဆိုတဲ့လူတွေနဲ့ အာဏာပိုင်တစ်ချို့ကိုသာ ငွေစာရင်းရှင်းတမ်းကိုထုတ်ပြခဲ့တာပါ ။
ပြည်သူတွေဆီက ငွေတိုးကောက်မှာကို ငွေစာရင်းရှင်းတမ်းကို ပြည်သူတွေဆီကို ချမပြသင့်ဘူးလား ။ ခုတော့ ဘယ်လောက်ရှုံးနေလို့တိုးကောက်မှန်းမသိ ။ အမြတ်ပိုချင်လို့တိုးကောက်မှန်းမသိနဲ့ ။ အတွေးခက်စရာပါ ။ မီးစက်ပြင်နေလို့ ၊ မီးစက်သန့်ရှင်းရေးလုပ်နေလို့ ဆိုပြီးမီးပျက်တာကလဲ ခဏခဏပါပဲ ။ နောက်ပြီတော့ ညနေ ၃ နာရီခွဲလောက်မှာတစ်ကြိမ် ၊ ညဆယ်နာရီလောက်မှာတစ်ကြိမ် မီး ခဏ ပြတ်သွားတတ်တယ် ။ မီးချိန်းတာလားတော့မသိဘူးပေါ့နော် ။
လက်ရှိအချိန်မှာအလွန်ဆိုးရွားနေတဲ့နေရာကတော့ ဒွါရာဝတီတံတားကြီးပေါ်မှာပါပဲ ။ အရင်တစ်လောကတော့ တံတားကြီးပေါ်မှာမီးလင်းပါသေးတယ် ။ နောက်ပိုင်းကတော့ လူငယ်တွေကမီးချောင်းတွေကို ဖျက်ဆီးပစ်တယ်ဆိုလားပဲ ကြားမိပါတယ် ။ အဲဒါကြောင့်တံတားကြီးပေါ်ကိုမီးဆက်လက်မပေးတော့ပါ ။ တံတားကြီးမှာမှောင်မဲနေပါတယ် ။ လူငယ်တွေဖျက်ဆီးတာကိုအပြစ်ပြောနေယုံနဲ့မရပါဘူး ။ အဲဒီလိုဖျက်ဆီးမခံချင်ရင် ဖျက်ဆီးလို့မရအောင်လုပ်ပေါ့ ။ မီးချောင်းကို သံဇကာလေးနဲ့ လေးထောင့်လေး ကာထားကြည့်ပါလား ဘယ်လိုခွဲလို့ရတော့မှာလဲ ။
မီးမှောင်နေတော့ နောက်ဆက်တွဲလေးတွေခုစဖြစ်နေပါပြီ ။ သမီးပျိုလေးတွေကို ညဘက်တွေမှာမိဘတွေက တံတားကြီးကိုဖြစ်မသွားစေချင်တဲ့အထိဖြစ်လာပါပြီ ။ ဘာကြောင့်များပါလဲ ။ အဖြေကဒီလိုပါ တံတားပေါ်မှာမှောင်မဲနေတော့ လူငယ်တွေရဲ့အရက်ဝိုင်းလေးတွေဖြစ်လာပါတယ် ။ မူးလာကြတော့တဲ့အချိန်မှာ မိန်းကလေးတွေကို စနောက်တာတို့ ။ တစ်ချို့ဆို နောက်ကလိုက်ဆွဲတာတို့ ။ မကြားဝံ့မနာသာလိုက်ပြောတာတို့ဖြစ်လာပါတယ် ။ ပိုဆိုးတာတစ်ခုကတော့ တံတားကြီးပေါ်မှာ ကမ်းခြေဒေသက ဥာဉ့်ငှက်မလေးတွေလာရောက်ကျက်စားနေကြတာပါပဲ ။ ည ၉ နာရီလောက်အချိန်တွေမှာဆို တံတားပေါ်မှာ ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းရောင်းနေကြတဲ့မိန်းကလေးတွေကိုတွေ့လာရပါတယ် ။ စောင့်ကြည့်မနေရဲလို့ပါ ။တစ်ကယ်လို့များဆက်စောင့်နေရင် လူပြတ်တဲ့အချိန်ဆိုရင် တံတားကြီးပေါ်မှာ ချစ်ဗျူဟာခင်းကြမလားပဲ ။
အဲဒီလိုတွေဖြစ်တာများလာတော့ အမျိုးကောင်းသမီးလေးတစ်ယောက် အရေးကိစ္စရှိလို့ ည ၇ နာရီလောက်တံတားပေါ်ကဖြစ်သွားရင်ပဲ ဘာလားညာလားဆိုတဲ့အကြည့်တွေကိုကြည့်ခံနေရပါပြီ ။ အရင်းစစ်တော့အမြစ်ကမြေထဲမှာတဲ့ ။ အဲဒီကိစ္စကိုအဖြေရှာလိုက်တော့ ဖိုးသီးချိုဆိုတဲ့တရားခံကိုတွေ့တာပါပဲ ။ တစ်ချိန်တုန်းက မြင်တွေ့ခဲ့ဖူးပါတယ် ။ လသာသာနဲ့ မိုးသာလေသာညတွေမှာ တံတားကြီးပေါ်မှာ မိသားစုတွေ မီးရောင်အောက်မှာ လမ်းလျှောက်ရင်း လေညှင်းခံနေတတ်ကြပါတယ် ။ ခုတော့ ဒွါရာဝတီတံတားကြီးပေါ်မှာ မောင်နဲ့နှမ ၊ သားနဲ့အမိ အတူတူသွားရင် တစ်ယောက်မျက်နှာတစ်ယောက်လှည့်မကြည့်ရဲလောက်အောင် ဆိုးတဲ့အဖြစ်တွေဖြစ်နေပါပြီ ။
ကြည့်လုပ်ပါဦး ဖိုးသီးချို ရယ် ။ ။
ဒီကိစ္စ ကြားမိပါတယ် သူတို့က ဘာမှလုပ်မပေးသေးဘူးထင်ရဲ့နော်
စောင့်ရှောက်ခ လဲ ပိုယူထားသေးတယ် မဟုတ်ပါလား
တစ်ကယ်ဆိုရင် လမ်းမီးလေးတော့ လင်းအောင်လုပ်ပေးရမယ်ပေါ့ဗျာ
လူထုရဲ့သဘောမပါပဲ မြို့မိမြို့ဖ ဆိုတာကြီးတွေနဲ့ ဆုံးဖြတ်တဲ့ကိစ္စ ဟာ နေရာတစ်ကာတော့
အမြဲ မှန်တယ် မယူဆနိုင်ပါဘူး၊
သူတို့အတွက် ငွေ တစ်ထောင်က တန်ဖိုးမရှိပေမဲ့ တစ်နေ့ဝမ်းစာ တစ်နေ့ ရှာစားရတဲ့
လက်လုပ်လက်စား ကျဘမ်း မိသားစုတွေ အတွက် အရမ်းခက်ခဲလို့နေပါတယ်။
ဖိုးသီးချိုကုမ္ပဏီ ကလဲ အဲဒီ ငွေ တစ်ထောင်မရခဲ့ရင် မီးစက်တွေကိုသိမ်း ပြီး ပြန်တော့မယ်
လို့ ပြောသံကြားပါတယ်။ ခက်တော့ခက်နေပါပြီ။
ဒီလိုပြဿနာမျိုးကို ကုမ္ပဏီကလည်းသိပါတယ်။တတ်အားသ၍ပြုပြင်ပေးနေပါတယ်။အရင့်အရင်က ပျက်စီးယိုယွင်းနေသမျှကို
ခုမှလိုက်ပြင်နေရတော့ အချိန်ပေးကြပါ။အားလုံးသူမျှော်လင့်သလို ကြိုးစားနေပါတယ်။သူများငွေကို အလကားတော့မယူပါဘူးဗျာ။
ဒါတော့ဟုတ်တယ်။ကိုယ့်မြို့ ကသူတွေအသုံးမကျလို့ စေတနာထားလုပ်ပေးနေသူတွေကို အားပေးကြပါ။ဖေးမကူညီကြသင့်ပါတယ်။
ကိုအာရကခမြေသား ပြောတာမှန်ပါတယ် ဒီလိုစေတနာလုပ်ပေးနေတာကိုကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတင်ရ
မှာပါ လမ်းမီးကလဲ သူတို့ငွေနဲ့တတ်ပေးတာပါ မြို့သားတွေမကောင်းတော့ လင်းနေတဲ့နေရာ
ကျွန်တော်တို့မြို့ မှာ မီး (24) နာရီဆိုတာအိမ်မက်တောင်မမက်ဖူးပါဘူး
မီးလင်းရေးတုံးက2နာရီသာရပြီး သုံးသုံး မသုံးသုံး 5000 ပေးရတာတော့ပိုဆိုးပါတယ်
အဲ့ဒီဘ၀ မရောက်အောင် တော့ကျွန်တော်တို့မြို့သားတွေ ကူညီစေချင်တယ်
ဒီ 1000 ဆိုတာဘာမှမဟုတ်ပါဘူး တစ်ယူနစ်ကို 125 ဈေးနဲ့ ပေးတဲ့ 10 ယူနစ်စာသာရှိပါတယ်
10ယူနစ်သုံးမှ စုစုပေါင်း 2250 သာကြတာပါ မီးလင်းရေးထက်တော့ အဆ50 လောက်ကွာပါတယ်
သူတို့ခဗျာ သိန်း50 လောက်ရှုံးပါတယ် နိုင်ငံတော်က တစ်ယူနစ်ကို 25 ကျပ်နဲ့ပေးရမယ် 10 ယူနစ်
ထိကိုဆိုတော့ ဆီက ဆယ်ယူနစ်စာ နိုင်ငံတော်က အလကားပေးတယ်ဆိုပေမဲ့ သယ်ယူစရိတ်
4 သိန်းလောက်ကုန်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ် အစိုးကိုလဲ တစ်ယူနစ် ကို 25 ကျပ်နှုန်းနဲ့ ပြန်သွင်းရ
သေးတယ် 10ယူနစ်ကျော်သုံးတဲ့ မီတာက တ၀က်ကျော်ရှိတယ်
ဒီတစ်ထောင်လေးပိုကောက်တာတောင် 10 သိန်းလောက်ရှုံးနေပါသေးတယ်လို့ပြောပါတယ်
ဒါပေမဲ့ သူတို့က ရေရှည်ကို ကြည့်ပြီး နွေရာသီလောက်ဆိုရင် သူတို့အမြတ်ရလာနိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်
သူက မပေးလဲရတယ်လို့ပြောတယ် ဒီလတောင်မပေးတော့ဘူးလို့ စက်တွေကိုပိုင်ရှင်ကသိမ်းခိုင်းတာ
မြို့မိမြို့ဘတွေနဲ့ အာဏာပိုင်တွေနဲ့ ညှိပြီးအဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေးထားတာပါ
ဒါမှမဟုတ်ရင်တော့ အစိုးရကပေးတဲ့မီးက သူတို့ပေးတဲ့ဆီနဲ့ 13း0 နာရီလောက်ရမယ်လို့သိရပါတယ်
ဖရောင်းတိုင်ထွန်းကြည့်ပါ တစ်လကို 10000 ဖိုးနဲ့ လောက်မလားလို့
ဒို့မြို့ လေးက 24 နာရီမီးရတဲ့အတွက်ပထမအကျိုးခံစားရတာက ကျောင်းသား/ကျောင်းသူလေးတွေ
ဘယ်အချိန်စာကျက်ကျက်၊ နောက် မိဘဘိုးဘွားသက်ကြီးရွယ်အိုတွေ ညရေး ညတာ ကိစတွေ
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွေ ကွန်ပြူတာဆိုင်တွေ အင်တာနက်ဆိုင်တွေ
အမှောင်ကိုအားပြုပြီးလုပ်စားနေတဲ့ သူခိုးတွေ ဘယ်ရောက်ကုန်လဲ စဉ်းစားဘို့လိုပါတယ်
24 နာရီမီးရတဲ့အတွက် လူတွေရဲ့ဘ၀ လူ့အဆင့်အတန်း လူတွေရဲ့စီးပွားရေးတွေ တိုးတက်
သူတို့က မီး5နာရီလောက်ပေးပြီး ယခု သုံးစွဲယူနစ်လောက်ပဲရအောင်ပေးလို့ရပါတယ်
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဒီမီးလာတဲ့အချိန်လေးမှာဘဲ လူတွေကစုပြီးအားလုံးသုံးကြမှာလေ
ဒီတော့ ဒီယူနစ်က လျှော့သွားမလား
ဒါကြောင့် အလင်းရောင်ကိုအပူထင်ပြီးနေမင်းကိုတော့အပြစ်မတင်ပါနဲ့ နေ၀င်သွားတော့မှ
နေမြင်ချင်ရင်တော့ နောက်တစ်နေ့ မိုးလင်းအောင်ပြန်စောင့်ရမှာနော———-
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဗျာ အကောင်းရှိသလို အဆိုးလဲရှိပါတယ် ကိုရဲဆေဇာ ရေးထားတာလဲ မဆိုးပါဘူး
ဖိုးသီးချိုအဖွဲ့ လျှပ်စစ်မီးပေးတာ (၄) လ ကျော်နေပီလေ
သူ့ဆန်စားရင် ရဲရပေမပေ့ါ ။
ကျွန်တော်သိသလောက်တော့လမ်းမီးအနေအထားကိုပြောပြပါမယ်။တစ်ချို့နေရာတွေမှာ လမ်းမီးမရောက်သေးတာက၀န်ကြီးဌာနကဆားဗစ်ကြိုးချမပေးတာကြောင့်ဖိုးသီးချိူအနေနဲ့ လမ်းမီးတိုင်တွေမှာမီးချောင်းတွေမတပ်ဖြစ်သေးတာပါ။တကယ်လို့ ၀န်ကြီးဌာနကသာ ဆားဗစ်ကြိုးတွေ ချပေးခဲ့ရင် တစ်မြို့လုံးကို လမ်းမီးဆင်ဖို့အတွက် ဖိုးသီးချိုမှာ အဆင်သင့်ရှိတယ်လို့ ကြားသိရပါတယ်။ ငွေ(1000) ကျပ်ကို ထပ်မံပြီးပံ့ပိုးပေးတယ်ဆိုတာက မြို့မိမြို့ဖတွေတင်မဟုတ်ဘဲ ရပ်ကွက်သူရပ်ကွက်သား ကျေးရွာသူကျေးရွာသား အယောက်(200)ကျော်က သဘောတူညီမှုနဲ့ ပေးခဲ့ကြတာပါ။အခုလို ပေးထားတဲ့ လမ်းမီးတွေအတွက် မီတာခတစ်လကို (700000) ခုနှစ်သိန်းကျော် ကုန်ကျတာတွေကို ဖိုးသီးချိုဝန်ဆောင်မှုကပဲ ကျခံပေးနေတာပါ။ တကယ်လို့ တစ်မြို့လုံးလမ်းမီးတွေဆင်ပြီးသွားရင် သူတို့ဘောက်ချာမှာပါတဲ့အတိုင်း လမ်းမီးခ ကောက်ခံသွားမှာပါ။ဒါက ဖိုးသီးချိုနဲ့ ၀န်ကြီးဌာနတာဝန်ရှိတဲ့အပိုင်းကို ခွဲခြားပြီး သံတွဲသားတွေနားလည်အောင်ပြောပြတာပါ။ကျွန်တော် နောက်ဆုံးပြောချင်တာတစ်ခုကတော့ ကျွန်တော်တို့ သံတွဲမြို့ (24)နာရီ မီးရရှိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဖိုးသီးချိုလျှပ်စစ်ဝန်ဆောင်မှု အပေါ်မှာ စိတ်ညစ်အောင် မဆောင်ရွက်ကြပါနဲ့လို့ သံတွဲသားများကို စေတနာနဲ့ မေတာရပ်ခံပါတယ်။အခုလောလောဆယ်မှာ ဖိုးသီးချိုလျှပ်စစ်ဝန်ဆောင်မှုကလည်း ဘယ်ကုမဏီကမဆို လွှဲပြောင်းလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်း လွှဲပြောင်းပေးဖို့ အဆင်သင့်ရှိတဲ့အကြောင်းကို ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှုးနဲ့ ၀န်ကြီးချုပ်ထံကို တင်ပြထားတယ်လို့ တာဝန်ခံကိုမင်းမင်း၏ ပြောပြချက်အရ သိရပါတယ်။အဲဒီတော့ သူတို့မလုပ်ရင် ကျွန်တော်တို့မြို့က သူတို့လို ဘယ်သူမီးပေးနိုင်မလဲဆိုတာ ………………………………
Thantwethar seems right,
” ဖိုးသီးချိုလျှပ်စစ်ဝန်ဆောင်မှု” is challenging now.
“ဖိုးသီးချိုလျှပ်စစ်ဝန်ဆောင်မှုကလည်း ဘယ်ကုမဏီကမဆို လွှဲပြောင်းလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်း လွှဲပြောင်းပေးဖို့ အဆင်သင့်ရှိတဲ့အကြောင်း”
“သူတို့မလုပ်ရင် ကျွန်တော်တို့မြို့က သူတို့လို ဘယ်သူမီးပေးနိုင်မလဲဆိုတာ”
Our country is poor.
We ( our people ) are poor.
Comment တို့ကို စာဖတ်သူတို့အတွက် အကျိုးရှိ/ကျန်ရစ်စေမည့် စာများသာရေးကြပါရန်။
သဂျီးက အော်သာ အော်နေတာ … ဘာ action မှ မယူတော့ …. သင်္ကြန်အမြှောက်လိုပဲ .. အသံသာ ကျယ်ပြီး တကယ် အဆံမရှိဘူးလေ
၂ ဘက် ဗျ
တစ်ဘက် က အင်အားပိုတယ်
တစ်ဘက် က အင်အားနဲ တယ်
ဘယ်သူ တွေ မှန်လဲတော့ မသိဘူး
ဆန့် ကျင်ဘက်ကို အနီ
ကျုပ်လဲ နီချင်သလောက်နီ ကျ
ပွိုင့်ရလို့ ဝင်မန့် တယ်
ရတယ်မရဘူးတော့ ကျွန်တော်မသိဘူးကိုယ့်ညီကို ရေ။အပြာတွေ၊အနက်တွေရောမရှိတော့ဘူးလား။
Recently, at least 25% of MG are complaints & arguments between ******* people.
It will be better to change the name of our Web Site,
From Mandalay Gazette to ******* Gazette
Dear ******* villagers,
I have been to Rakhine state several times.
I understand your intention ( to attract/draw attention from Government ) &
I understand your feeling & I also have real sympathy on you. Trust me.
But, friendly speaking ( I mean say with ” Myitta ” & ” Say Ta Nar ” )
(1) other people around Myanmar also suffered the same situation like you & sometimealot worse situation than you.
(2) to improve your recent life,
every Rakhine people need to work very very hard,
rather than talk and complain and back stabbing to others.
Take example from Chinese people around the world.
(3) In my opinion, your people also need to reduce your over-drinking (alcohol) habit.
(4) Be patient, if you can reduce your drinking & complaining habits & work together very hard, trust me, Rakhine state will become very nice, tranquil & developed area, withinadecade.
I love & trust my Rakhine people,
You are the only barrier of Myanmar from our western aggressive neighbour.
We want to rely on you, Rakhine people.
Yel ag lun’s right because it’s our chance. I enjoy this post and comments. How nice !!
ကျနော် သိပ်ရင်နာတယ်။ကိုယ့်မြို့ လေးအရင်လိုအမှောင်ထဲမှာပြန်နေရမှာတော့ မလိုလားဘူး။မြို့ မိ၊မြို့ ဖတွေရေ ကယ်ပါအုံး။
ကိုယ့်ညီကို ကတတ်နိုင်ရင်ကူညီပါအုံး။စေတနာကို မစော်ကားကြပါနဲ့ ။မိဘပြည်သူများရောအားလုံးလိုအပ်ချက်တွေ
ဟုတ်ကဲ့ပါဗျ အားလဲပေးဖို့ ဝိုင်းလဲဝိုင်းလုပ်ကြဖို့ စီစဉ်ထားပါတယ် မိဘပြည်သူ အများစု စိတ်ချမ်းသာစေဖို့လေ
စိတ်ချပါ အားလုံးသေချာစီစဉ်ထားပီးပါပြီ ဂတိပေးပါတယ် ။
လိုချင်တာနဲ့ ပေးနိုင်တာနဲ့ ကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ညှိနှိုင်းဖို့လိုပါမယ်။ ဖိုးသီးချိုကုမ္ပဏီကလည်း ကုန်ကျစရိပ်ကို ချပြစေချင်ပါတယ်။ တကယ်လို့ အကျိုးအမြတ်နဲလို့မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်။ ရွာသားတွေထဲမှာ နားလည်တဲ့သူတွေ စုပြီး နိုင်ငံတော့်ကိုချေးငွေချပေးဖို့တမြို့လုံးစာတင်ပါ။ ကျနော့်အမြင် တမြို့လုံးအားနဲ့ဆို ချေးငွေကိစ္စ အဆင်ပြေလောက်တယ်။ လုပ်တဲ့အလုပ်ဟာ ဘဏ်တိုးလောက် ကိုက်တယ်ဆိုရင်ပွဲပြီးပါပြီ ။ဘယ်သူမှ အမြတ်ပေးစရာမလိုပါ။ ဘဏ်တိုးတောင် မကိုက်ပဲ ရှုံးမယ်ဆိုရင်တော့ ဖိုးသီးချိုကုမ္ပဏီကိ်ုပဲ ပြန်ချော့မော့ပြီး အဆင်ပြေအောင်ညှိနှိုင်းပြီး လုပ်ခိုင်းသင့်တယ်လို့မြင်မိပါတယ်။
သူ့လို အပြုသဘောဆောင်တဲ့ အကြံပြုမှတ်ချက်မျိုးနဲ့ဆို နှစ်ဖက်စလုံးအတွက် စဉ်းစားစရာ ဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်။
ကိုရင် nature ပြောတာ၊အကြံပြုတာမဆိုးပါဘူး။လက်သင့်ခံရပါလိမ့်မယ်။
ဒွါရာဝတီတံတားကြီး မီးမှောင်နေတဲ့ ကိစ္စဟာ အစ်ကိုတို့သံတွဲမြို့မှာ နှစ်အတန်ကြာကတည်းက မှောင်နေတယ်ဆိုဒါ မြို့ခံမိတ်ဆွေတစ်ယောက်ဆီက သိ၇ပါတယ်။သူပြောပြတာကတော့ အထက်က မှတ်ချက်တစ်ခုမှာပါတဲ့ အတိုင်းမြို့လူငယ်တွေ သောက်စားမူးယစ်ကာများယွင်းတဲ့ ပျော်ရွှင်မူများကြောင့် လိုဆိုပါတယ်၊ဒါကြောင့်မြို့ခံတွေ အနေနဲ့ကလည်း မိမိတို့သားသမီးအပေါင်းအပါများကို ဆုံးမမှုများလဲပြုလုပ်ပေးစေချင်ပါတယ်၊နောက်ပြောချင်တာတစ်ခုကတော့ ကိုယ့်မြို့မျာခိုင်မာနေတဲ့ တိုးတက်မှုတစ်ခုကို ဆုတ်ယုတ်မသွားအောင် ၀ိုင်းဝန်း ဆောင်ရွက်ကြပါလို့၊မြို့ခံကစည်းကမ်းမရှိရင် သံဇကာ (၁၀)ထပ်ကာလဲ မရပါဘူး၊ လက်ခုတ် ဟာနှစ်ဖက်တီးပါမှ မြည်တာပါလို့……………………………………….
(ဒွါယာဝတီမြို့ဦးတံတားကြီး မကြာမီ မီးများလင်းနိုင်ပါစေလို့)
ကျွန်တော်သိသလောက်တော့လမ်းမီးအနေအထားကိုပြောပြပါမယ်။တစ်ချို့နေရာတွေမှာ လမ်းမီးမရောက်သေးတာက၀န်ကြီးဌာနကဆားဗစ်ကြိုးချမပေးတာကြောင့်ဖိုးသီးချိူအနေနဲ့ လမ်းမီးတိုင်တွေမှာမီးချောင်းတွေမတပ်ဖြစ်သေးတာပါ။
ဒီစကားလေးကိုပြန်ရှင်းချင်ပါတယ် ။ ကျွန်တော်ပြောထားတဲ့နေရာတွေမှာ ဆားဗစ်ကြိုးမရောက်သေးတဲ့နေရာမပါပါဘူး ။ အဓိကထားပြောခဲ့တဲ့ တံတားကြီးကို Thantwethar မရောက်ဖူးသေးတာတော့မဖြစ်နိင်လောက်ပါဘူးနော် ။ တံတားကြီးပေါ်မှာ ဆားဗစ်ကြိုးမရှိဘူးဆိုရင် တစ်ဘက်ကမ်းက အံတော်ကွက်သစ်ဘက်တွေ ဘာလို့မီးရနေရတာလဲ ။ ကျွန်တော်တင်ထားတဲ့ ပိုစ့်ကိုပြန်ဖတ်ကြည့်ပါဦး ။ တင်ထားတဲ့ပိုစ့်ကိုသေချာမဖတ်ပဲ ကွန်မန့်ရေးတာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့လို့တောင်းပန်ပါတယ် ။ ဖြစ်နိုင်တာကိုတောင်းဆိုတာပါ ။
မှာပါ လမ်းမီးကလဲ သူတို့ငွေနဲ့တတ်ပေးတာပါ …….
ဒီစာလေးကိုလဲရှင်းချင်ပါတယ် ။ ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ စည်ပင်က အိမ်ခွန် ၊ အမှိုက်ခွန် ၊ မီးခွန်တွေကောက်တာသိပါလား ။ ကျွန်တော်သိသလောက်ကတော့ မီးခွန်ဆိုတာ လမ်းမီးတွေနဲ့သက်ဆိုင်တယ်လို့ထင်ပါတယ် ။
မောင်တုတ်ကြီးပြောတဲ့စကားကိုလဲဘ၀င်မကျပါဘူး ။ သံတွဲမြို့ဘယ်တော့မှပြန်မှောင်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူး ။ ဖိုးသီးချိုမီးမပေးတော့ရင်လဲ မီးပေးဖို့စီစဉ်ထားတဲ့သူတွေရှိပါတယ် ။ ကျပ် သိန်း (1500) လောက်ရင်းနှီးပြီးလုပ်မယ်ရည်ရွယ်ထားတဲ့သူတွေလဲ ရှိသဗျ ။ ကျွန်တော်တစ်ခုလောက်ပြောချင်တယ်ဗျာ ။ နောက်ကျွန်တော်တင်တဲ့ပိုစ့်တွေမှာ Thantwethar ရယ် ၊ အာရက္ခမြေသားရယ် ၊ ကိုတုတ်ကြီးရယ် အကျိုးပြုစကားမပြောပဲ အာဏာရှင်တွေ ၊ ငွေရှင်ကြေးရှင်တွေဘက်က ကာကွယ်တဲ့စကားတွေ မြို့ပျက်စီးမှာကိုဂရုမစိုက်ပဲ ကိုယ်ကျိူးကြည့်သူတွေကို ကာကွယ့်မယ့်စကားတွေကို ဆက်ပြောနေမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တင်တဲ့ပိုစ့်တွေမှာ လုံးဝ (လုံးဝ) ကွန်မန့်ဝင်မပေးပါနဲ့ ။ မြို့တိုးတက်ရေးအတွက် စိတ်ကောင်းစေတနာမှန်နဲ့ ၀င်ရေးမယ်ဆိုရင်တော့ လက်ကမ်းကြိုဆိုပါတယ် ။ ခင်ဗျားတို့ထိထားတဲ့ အနီကဒ်တွေကိုလဲ ပြန်ကြည့်ဦးပေါ့ဗျာ ။ ဇာတ်စင်နောက်မှာထိုင်ပြီးမင်းသမီးငါ့ကိုကျောပေးကနေပါလားဆိုတဲ့အတွေးမျိုးတွေကို မတွေးကြပါနဲ့တော့ဗျာ ။ သံတွဲသားစစ်စစ်တွေရင်လေးတယ် ။
လမ်းမီးတွေက အရင်ကည(၇း၀၀)နာရီကနေ (၁၁) နာရီထိဘဲ မီးရတော့ လမ်းမီးတွေက အချိန်ပြည့်ရတာပေါ့။အခုအားလုံးသိအောင် ရှင်းပြရရင် မီးက(24)နာရီရပြီဆိုတော့ လမ်းမီးအတွက် သီးသန့် ဆားဗစ်ကြိုးသွယ်တန်းပေးထားတဲ့ နေရာတွေမှာပဲ လမ်းမီးတွေရနေတာပါ။ လမ်းမီးအတွက် သီးသန့် ဆားဗစ်ကြိုး မရတဲ့နေရာတွေမှာ လမ်းမီးအခုချိန်ထိ မလင်းသေးဘူးဆိုတာ တွေ့ရမှာပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အရင်ကလို လမ်းမီးတွေကို ဆားဗစ်ကြိုးသီးသန့် မရသေးတဲ့နေရာမှာ လမ်းမီးထွန်းပေးထားရင် (24)နာရီ မီးလင်းနေမှာဖြစ်တဲ့အတွက် ဖိုးသီးချို မီးလင်းရေးက မီးမထွန်းပေးတာပါ။ ဒါကို အားလုံးသိအောင် ပြန်လည်ရှင်းပြတာပါ။ yetazar ပြောတဲ့အနီကဒ်ဆိုတာကို ကျွန်တော်ဂရုမစိုက်ပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တင်တဲ့ “ငပလီသို့အလည်တခေါက်အရောက်လာခဲ့ပါ” ပိုစ့်မှာ ကိုယ့်မြို့ခရီးစဉ်၊နေရာလေးတွေရေးထားတာတောင်မှ ရဲပလောင်းခတ်အောင်နီနေတာတွေတွေ့နေရတာပဲ။ သံတွဲသားတွေ အကောင်းမြင်ဝါဒနဲ့ လူတွေအပေါ်မှာ မြင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။
ဘယ်သူမပြုမိမိမှုတဲ့ ကွေ့ပီးသွားတဲ့သူက တိုင်ပတ်နေမှာပဲလေ
ဖြောင့်ဖြောင့်သွားသူကတော့ လိုရာခရီးရောက်သပ ။
လူမှန်နေရာမှန် ဖြစ်ဖို့ အရေးကြီးတာကိုတော့ သင်ပေးစရာ လိုမယ်ထင်ဘူးဂျာ။
(1) Your explanation is reasonable.
(2) “အနီကဒ်ဆိုတာကို ကျွန်တော်ဂရုမစိုက်ပါဘူး”
You have no right to say like that ;
“ကျွန်တော်တင်တဲ့ပိုစ့်တွေမှာ လုံးဝ (လုံးဝ) ကွန်မန့်ဝင်မပေးပါနဲ့”
It is very rude, shame on you.
By the way, It is very simple,
ဖိုးသီးချိုလျှပ်စစ်ဝန်ဆောင်မှု has already challenged.
Some braggarts else want to do it (လျှပ်စစ်ဝန်ဆောင်မှု), then, do it now.
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကိုforeign resident ရေ။သူ့ လောက်ဒီသတင်းစာမှာ သြဇာအာဏာရှိတာမရှိဘူးထင်တယ်။
ကျနော်တို့ ကအကောင်းမြင်တတတ်ပါတယ်။လူနည်းစုကိုခုလိုနှိပ်ကွပ်တာတော့ မကောင်းပါဘူး။မဟုတ်တာရေးရင်တော့ဝင်ပြောရမှာဘဲ။
သူတို့ကလုပ်နိုင်ရင်လုပ်ကြဆိုတာကို စိန်ခေါ်တယ်လို့မယူဆစေလိုပါဘူး။ တူညီသော ယှဉ်ပြိုင်မှုအတွက် အခွင့်အရေးပေးတယ်လို့ အကောင်းမြင်စေချင်ပါတယ်။ နောင်အခါ အကျိုးအမြတ် ကောင်းမှ ပြန်မတောင်းကြေးဆိုတာကတော့ ကြိုတင်ကတိ တောင်းထားပါ။ ဒါအောင်မြင်သွားရင် တမြို့လုံးလည်း ပိုပြီးစည်လုံးညီညွတ်လာမယ်ထင်ပါတယ်။ အလုပ်မစခင် စေတနာကောင်းပြီး နားလည်တတ်ကျွမ်းသူများနဲ့ သေသေချာချာ တွက်ချက်ကြည့်ကြဖို့ တိုက်တွန်းပါတယ်။
ကြောင်ကြီး စကားကြားရတာ အမှန်တကယ်ပဲ ၀မ်းသာပီတိ ဖြစ်မိပါတယ်။
My dear yetazar, Goodness n excellent. That will do n very likely. Thank you very much.
ဒေသခံ ပြည်သူလူထု အများစုကို အကျိုးပြုနိုင်မဲ့ posts တင်ပေးနေတဲ့ သူတိုင်းကို စီစစ်လက်ခံ အားပေးနေပါတယ်။
ကျွန်တော် လဲ သံတွဲသား စစ်စစ်တစ်ယောက်ပါ။ ကို yetazar ရေးလိုက်တဲ့ တံတားပေါ်က အပေါက်ကြီးလဲ ခုတော့
ပိတ်သွားခဲ့ပါပြီ။ လမ်းသွားလမ်းလာတွေလဲ အန္တရာယ်ကင်းဘေးရှင်း တံတားပေါ်ဖြတ်ကျော်နိုင်ကြပါပြီ။
တံတားကြီးတစ်လျှောက် လမ်းမီးထွန်းလင်းပေးဖို့ရယ် မြို့လည် အဓိက လမ်းတွေမှာ လမ်းမီး ထွန်းလင်းပေးဖို့ရယ်
နှစ်ခုပဲကျန်ပါတော့တယ်။ ကို thantwethar ပြောတဲ့ ဆားဗစ်ကြိုး၊ ကေဗယ်ကြိုး ကိစ္စ အခက်အခဲမျိုးလုံးဝမရှိကြောင်းပါ
အဓိက မြို့ပေါ် တံတားပေါ်တွေမှာ မီးကြိုးများ ပြည့်စုံစွာ တည်ရှိနေကြောင်း သိစေလိုပါတယ်။
ဒီလောက်ပဲ ပြောပါရစေခင်ဗျာ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ ။
ကို yetazar ရေ အကျိုးပြု post များကို ယ္ခုလို မှန်မှန်ကန်ကန် တင်ပြပေးနိုင်ပါစေဗျား ။
ကျေးဇူးပါကိုကျော်ရေ ။ နောက်သံတွဲမြို့ရဲ့အဓိက လိုအပ်ချက်လေးတွေ ၊ ချို့ယွင်းချက်လေးတွေရှိရင်လဲ ပဂ္ဂိုလ်ရေးမဆန်တဲ့ ၊ အပြုသဘောဆောင်တဲ့ပိုစ့်လေးတွေတင်ပေးပါ့မယ် ။ ခုလိုကျွန်တော်ပြောတာလေးတွေကိုဂရုတစိုက်ကိုယ်တိုင်သွားကြည့်လေ့လာတယ်ဆိုတော့ အရမ်းဝမ်းသာပါတယ် ။ တံတားပေါ်ကအပေါက်ကြီး ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပါပြီ ။ မကြာခင်မှာ တံတားကြီးပေါ်မှာမီးလင်းလာတော့မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ် ။
အစကတော့ အနီတွေများလို့ပွဲကြမ်းနေတဲ့ ပို့စ်ပဲဆိုပြီး မ၀င်ဖို့ စိတ်ကူးပါတယ် ။ သူကြီး ကွန်မန့်တွေ့တာနဲ့ ၀င်လိုက်တာပါ။ ဖိုးသီးချိုကုမ္ပဏီ ဆိုတဲ့နာမည်လေးကတော့ဆန်းသား ။ဘယ်လိုစိတ်ကူးနဲ့ ဘယ် ဗေဒင်ဆရာနဲ့မှည့်သလဲမသိ။
ချို= သံတွဲသားများ အားလုံးချိုမြိန်စွာ ခံစားနိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ်။
အတွေ့ အကြုံ နုနယ် ၊ စကားမကြွယ် ကြသေးတဲ့ အပျံသင်စ လေးတွေကို ဝင်ရောက်ပီး အကြံဥာဏ်ပေးဖေါ်ရတဲ့
အကိုများ၊ အမများ ဦးဦး ဒေါ်ဒေါ် များ တို့ကို ကျေးဇူးပါ။ ( ကို yetazar ကိုစား)
နောင်လဲ သင့်တင့်သလို ဆွေးနွေးပေးစေလိုပါတယ် ခင်ည ။
ကျနော်များမြို့ နေလူတန်းစားတွေကလဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အကြံပေးထားကြတာအရမ်းသင့်လျော်ပါတယ်။
လမ်းစရှာလို့မလွယ် မျက်စိလည်သွားပီကွယ် (song)
လိမ္မာ ရေးခြား ရှိလိုက်ကြတာ..